Velashape Warshadda Qaabeynta jirka | Shiinaha Velashape Body Contouring-saareyaasha iyo Shirkado
Mini Kuma Qaab Pro 5-In-1 ...
Kuma Qaab Pro 5-In-1 Body ...
Dhis murqaha & Guba fa ...
Coolplas Cryolipolysis Dufan ...
Cavitation RF Lipolaser Mashiinka 6-In-1
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Qalabka wuxuu isku daraa tignoolojiyada badan ee Multipolar iyo Bipolar RF oo leh Vacuum, 40K Cavitation iyo Lipolaser.
Multipolar iyo Bipolar RF oo leh Vacuum
Hormarinta Multipolar RF waxay si qoto dheer u gaarsiisaa tamarta kuleylka ah lakabka maqaarka, waxayna ku baaqeysaa codsashada hirarka elektromagnetic-ka si ay ugu soo noqoto geeddi-socodka jirka Waxay bixisaa natiijooyin wax ku ool ah oo daaweyn ah oo ku saabsan cellulite, qaabeynta jirka iyo dib-u-cusboonaysiinta kolajka.
Iyada oo wada jir ah madaxa mawjadaha codka adag, mowjadda codka culus ee 40KHZ ayaa laga yaabaa in lagu sii daayo si loogu ruxo unugyada baruurta xawaaraha ugu sarreeya isla markaana loo soo saaro jeebado hawo badan oo faaruq ah gudaha iyo dibedda unugyada baruurta, si xoog leh u saameeya unugyada dufanka si ay u soo saaraan qarax is-dhexgal ah una kala-baxaan triglyceride glycerol iyo bilaash asiidh dufan leh.
Laylaslaser oo looyaqaano laser jilicsan, laser qabow ama laser laser heer hoose, lipolaser wuxuu isticmaalaa tamarta laydhka cas 650nm laser si uu maqaarka u dhex galo, marka unugyada baruurta la matalayo, xuubka unugyadu wuxuu abuuri doonaa daloolada si loo sii daayo asiidh dufan leh iyo glycerol Unugyada baruurta ayaa lagu gubi doonaa ama lagu nadiifin doonaa wareegga qanjirada ee leh daaweynta infrared.
Ultrabox 6 IN 1 Cavitation Mashiinka Slimming RF
Mashiinka wuxuu qaataa mawjadaha 'ultrasonic' si loo gaaro natiijada la filayo ee ka saarista dufanka, taas oo ah saameynta Cavitation. Adoo adeegsanaya falalka xasilloonida-xasilloon ee xasilloon ee unugyada adipose, makiinadani waxay muujineysaa horumar farsamo oo weyn iyo horumar cusub oo tiknoolajiyad fatdissolving ah.
Mashiinka khafiifinta ee Cavitation RF wuxuu si wax ku ool ah u qarxin karaa Cellulite-ka. Iyada oo diiradda la saarayo hirarka acoustic ee soo noqnoqda, waxay soo saartaa Cavitationeffect si ay u qarxiso Cellulite, iyada oo loo marayo abuurista goobooyin yaryar oo ku dhex jira unugyada dufanka leh ee soo baxa oo keena unugyada baruurta inay waxyeelloobaan
iyada oo la sii daayo dhammaan dareerayaasha dufanka leh iyada oo aan waxyeello loo geysanayn unugyada kale ee jirka, sida xididdada dhiigga iyo nidaamka qalliinka. Intaas ka dib, jidhku wuxuu u aqoonsan yahay unugyada dufanka leh ee waxyeellada leh iyo dareerayaasha inay yihiin sunta ka dibna wuxuu ka baxayaa ka saarista jirka iyada oo loo marayo nidaamyada lymfatikada iyo xididdada dhiigga. Waxaa intaa sii dheer, waxay adkeyn kartaa maqaarka iyo jirka, waxay kicineysaa tamarta muruqyada.
Dhanka kale, ilaali muuqaalka dhalinyarada. Nidaamkayaga 'Cavitation' wuxuu ka kooban yahay mashiinka martida loo yahay, qalabka madaxa lagu daweeyo mawjadda xiisaha leh, Cudurka madaxa ee laba-cirifoodka / Tripolar iyo qaybo kale oo dheeri ah Mashiinka martida loo yahay waxaa lagu qalabeeyaa 8 inji oo ah LED Backlight Liquid crystal displayand furayaasha bilowga. LCD kaliya maahan dejinta, laakiin sidoo kale waxay soo bandhigeysaa halbeegyada iyo waqtiyada daaweynta.
Kuma Qaab Mashiinka Qaabdhismeedka Kuma
Qalabka Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Kuma Qaabdhismeedka waa nidaamyo daaweyn synthetic loogu talagalay yareynta dufanka oo isu geeya inta jeer ee raadiyaha, iftiinka infrared iyo vacuum iyo mashiinka duugista mashiinka, afar teknoolojiyadood oo hal mashiin ah.
Tamarta waxay kululeysaa aagga la daweeyay, iyadoo la gaarsiinayo dufanka ku jira maqaarka hoostiisa. Unugyada baruurta ayaa ku dhalaalaya aagga la daweeyay inta lagu jiro daaweynta si loo gaaro yareynta dhumucda baruurta.
Raadiyaha raadiyaha (RF) oo leh labo roller ayaa dhex geli kara lakabka 0.5-1.5 cm maqaarka hoostiisa si uu ugu shaqeeyo unugyada loo yaqaan 'adipose tissue' si wax ku ool ah.
Iftiinka infrared-ka wuxuu kululeyn karaa unugyada isku xira ee dardargelinta dib-u-cusbooneysiinta kolajka iyo fiilooyinka laastikada ah. Waxay sidoo kale hagaajin kartaa wareegga dhiigga iyo wareegga qanjirada si kor loogu qaado dheef-shiid kiimikaadka.
Faakiyuum la hagaajin karo ayaa nuugi kara aagga bartilmaameedka inta u dhexeysa labada roller oo runtii ah 2 koronto. Tani waxay ka dhigi kartaa daaweynta si sax ah oo wax ku ool ah.
Gawaarida gawaarida ayaa sidoo kale duugaya aagga la daaweeyay si ay u sii daayaan daal iyo murqo xanuun. Geedi socodka oo dhan waa diirran oo aad u raaxo leh.
Mini Kuma Qaab Pro 5-In-1 Mashiinka Qalabka jirka
Mini Kuma Qaab Pro 5-In-1 Qalabka wuxuu diiradda saarayaa qaabeynta jirka, xaqiijinta iyo yareynta dufanka.
a) Qaabeynta jirka: Ujeeddadu waa in dib loo qaabeeyo jirka iyadoo diirada la saarayo meelaha dhibaatada ka jirto. Waxay sidoo kale bixisaa hagaajinta wareegga xididdada dhiigga, dheecaanka qanjirada, kicinta kolajka iyo elastin.
b) Dhimista Dufanka: Waxaa laga dhimay 70 ilaa 80% cellulite.
c) Xaqiijinta: Adoo yareynaya muuqaalka cellulite iyo jajabinta astaamaha maxalliga ah, maqaarku wuxuu lumiyaa dhawaaqa wuxuuna noqdaa wax yar oo dhudhun ah, xaalad ay ka hortageyso daaweyntan.
Mini Kuma Qaab Pro 5-In-1 Qalabka wuxuu qaataa tiknoolajiyada badan ee Cavitation, Frequency Radio, Nalalka infrared, Cadaadis taban iyo Roller Mechanical.
Kuma Qaab Pro 5-In-1 Mashiinka Qaabka Jirka
Kuma Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka oo loo yaqaan 'Shape Pro Body Contouring Device' wuxuu la shaqeeyaa isku darka 5 teknoolojiyadood: Joogtaynta Raadiyaha, Iftiinka infrared, Cavitation, Cadaadis taban iyo Iskeelka Mashiinka.
Daaweyntu waa hanaan aan duullaan ahayn, oo isticmaala nuugista cadaadiska faaruqa ah ee faakiyuumka ah si ay kor ugu qaaddo epidermis, derma iyo subagga subagga, ka dibna xidho oo kala fidiso unugyada isku xidhka ah ee kiliyaha kala duwan, taas oo si wax ku ool ah u burburin karta dufanka subcutaneous iyo isku soo ururin kara weelka xididdada dhiigga. wuxuu kobciyaa dheef-shiid kiimikaadka unugyada iyadoo la dedejiyo afar jeer. Tamarta ayaa kululaysa aagga la daweeyay oo gaareysa ilaa 43º Celsius Degree, taas oo keenta soo saarista asiidh dufan leh. Asiidhka dufanka leh waxay ku milmaan unugyada baruurta aagga la daweeyay inta lagu jiro daaweynta. Unugyada baruurta ee burburay waxaa jirka looga soo saari doonaa wareegga jirka ee caadiga ah.
Iyada oo loo marayo madaxyo kala duwan oo daaweyn ah, oo isku daraya 5 tiknoolajiyad, daaweynta ayaa la fuliyaa, oo ka kooban taxane ah 5 illaa 10 kalfadhiyo meelaha lagu daaweynayo muddada 15 min ilaa 2 saacadood, taas oo ku xidhan tirada meelaha .